Nweta awa 4000 YouTube na-elele anya ngwa ngwa na ndị na-ege ntị
Itinye ọrụ TikTok Fund Fund
Nweta ego YouTube gị taa!
Gbanyụọ ụzọ ntinye ego nke YouTube site na mkpọsa nkwalite na Social Media. Ka anyị weta ọwa gị n'ọkwa ọzọ na iwulite ndị na-ege ntị na ịkpata ego na YouTube.
Kwụpụ 1. Soro Ndị ọkachamara na-ekwurịta okwu
Uru ndị na-ege ntị
Na AudienceGain, anyị na-elekwasị anya na uru ọ bara n'ezie, ọkachamara, yana ogo nke ọrụ ndị ahịa anyị ga-enweta. Ọganiihu gị n'ahịa ga-abụ ihe akaebe.
Anyị ga-elekwasị anya n'ihe ndị bụ isi na-enyere ọwa gị aka itolite n'ụzọ kachasị eke na n'ụzọ zuru oke. Ebumnuche ebumnuche nke inyere vidiyo gị aka bulie ikike YouTube na-atụ aro ya.
Anyị na-ekwe ka Paypal dị ka usoro bụ isi maka ọrụ niile n'ihi na ọ bụ nke kachasị dịrị nchebe ma dị mfe maka ndị ahịa. Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ndị ama ama dịka Bitcoin, Skrill, Ego zuru oke, Westen Union, Payoneer, na-akwado yana.
Ahịa afọ ojuju bụ mgbe niile anyị na-ebute ụzọ. Nkwụghachi na 100% na-enweghị ịjụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ agwụbeghị dị ka itinye aka.
Iwu & Nchekwa
Anyị na-ahọrọ Social Media maka ọtụtụ usoro nkwado anyị. Agaghị ata gị ahụhụ ọwa YouTube maka iji ọrụ anyị ma anyị na-arụ ọrụ na nzuzo, nchekwa, na nzuzo nzuzo.
Anyị raara onwe anyị nye Nkwado Team nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na YouTube nke nwere ike inyere gị aka ngwa ngwa na ọkachamara ọ bụla ikpe. Anyị dị 24/7.
Atụmatụ Ego YouTube
Adabara YouTube Onye Mmekọ Mmemme.
100% ezigbo oge elekere.
100% nchekwa na iwu
Nsonaazụ dị mma maka ndụ.
Dabere na nkwado otu.
Ọrụ dị ezigbo mma na ezigbo ndị mmadụ! Nnọọ iwu !!! Ugbu a ọwa m na-ebipụta $ ekele maka ọrụ a dị ịtụnanya…
Aha ya bụ Marie Fleurimont
AudienceGain.net bụ ngọzi maka YouTubers dị ka anyị na-arụsi ọrụ ike n'ịmepụta ọdịnaya dị mma maka ndị na-ekiri anyị. N'okwu asọmpi a, ọ dịghị mfe ịnweta oge nche n'agbanyeghị etu ọdịnaya gị siri dị mma. Site na nnukwu ọrụ ndị ahịa sitere na AudienceGain, enwetara m monetization n'ime otu ọnwa nke ịhọrọ maka ọrụ ha. Jacob, site na ọrụ ndị ahịa, na-enye gị ọgwụgwọ VIP. Ana m akwado ọrụ ha maka ndị okike niile na-atụ anya oge elele anya dị elu na vidiyo ha.
Chineke m kedu ihe m ga -ekwu ndị a dị egwu, ugbu a amalitere m ikwenye na ọrụ dịka oge elekere na -abawanye na ihe niile bụ naanị n'ihi ndị na -ege ntị nwetara. Usoro m nke elekere elekere 3000 gwụchara n'oge, ha na -anọnyere m kwa ụbọchị iji kwado. A na -emezi ọwa m ugbu a ekele AudienceGain.net. Ana m akwado onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ nke ndị na -ege ntị, enwere m ike ịkụ nzọ na ị ga -abịaghachi ebe a iji nye ha 5*. Daalụ ton AudienceGain.net ????
MPlatter Egwu Egwu
, ụmụ okorobịa a nyefere ihe ha kpọsara n'ezie, ọrụ ha masịrị ha na ọrụ ha n'ozuzu ha Ha zara ajụjụ ọ bụla ngwa ngwa m na-akwado ha na ọrụ ha ejirila m ha ọzọ
Ịghọ ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa niile, TikTok bụ ebe na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ihe okike ha na ịchụso agụụ mmekọahụ ha na nnukwu ikike ...
Ntuziaka zuru oke maka otu esi ebuli TikTok Bio gị
Ọ bụrụ na ị nwere ebumnuche, na-azụ ahịa, ma ọ bụ na-ewu akara na TikTok, mgbe ahụ ịkwalite TikTok bio bụ ihe dị mkpa. Dị ka Instagram ma ọ bụ ...
TikTok ọ dị mma maka azụmaahịa?
A maara TikTok dị ka otu n'ime nyiwe mgbasa ozi ọha kachasị ewu ewu n'ụwa taa. Kemgbe ntọala ya na 2016, TikTok adọtala ndị ọzọ…
Detuo oku efu gi
Ị ka nwere nchegbu?
Enweghị ndị na-ere ahịa na-ere ere
Nweta Ohere a ugbu a !!!